Buy Snail Wish Whitening Cream ကို ဘယ်လိုလိမ်းရတာလဲ? in ေမာ္လျမိဳင္ (29,500 Ks) on ipivi
Snail Wish Whitening Cream ကို ဘယ်လိုလိမ်းရတာလဲ?
🐌Snail Wish Whitening Cream🐌 ကို ဘယ်လိုလိမ်းရတာလဲ? တဲ့
Day လား Night လား? သနပ်ခါး နဲ့ လိမ်းလို့ရ လား? ဆို သူ တွေ အ တွက်
မထိတွေ့ဖူးသေးရင် ခေတ် နောက် ကျ သွား မယ် နော် 😁😁
Quality က ရှယ် မို့ Try ကြည့် မို့ ဖိတ် ခေါ် ပါ ရ စေ 😘😘
၁. Whitening Cream အနေနဲ့လိမ်းခြင်း။
Snail Wish Whitening Cream က လိမ်းလိုက်တာနဲ့ အသားထဲစိမ့်၀င်ပြီး ဖြူ၀င်းလာစေတာကြောင့် Whitening အနေနဲ့လိမ်းလို့ရပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်၊ ပွဲတက်မယ် အသားအရေမှိုင်းနေတာ စိုးရိမ်နေရင် အသားပေါ်နေတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ Snail Wish လေးကို လိမ်းလိုက်ပါ။ မီးရောင်တွေအောက်မှာ ✨Snow White✨ လေးလို ဖြစ်နေစေမှာပါ။ ဒါ့အပြင်နေ့စဉ် အပြင်ထွက်ရင်လည်း မိတ်ကပ်တွေမလိမ်းချင်ရင် Snail Wish လေးပဲလိမ်းထားလို့ရပါတယ် သဘာဝကျကျဖြူ၀င်းနေစေတာကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှပနေစေပါတယ်။
***လည်ပင်းကိုလည်း လိမ်းဖို့ မမေ့နဲ့နော်****
၂။ Skin Care အနေနဲ့လိမ်းခြင်း။
Snail Wish Whitening Cream မှာ အဖိုးတန် Skin Care ပါ၀င်ပစ္စည်းများစွာပါ၀င်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Day Cream, Night Cream အနေနဲ့လိမ်းပြီး သင့်အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။ Snail Wish ကို ပုံမှန်လိမ်းထားပေးရင် အသားဖြူ၀င်းလာခြင်း၊ အသားအရေ တင်းရင်းလာပြီး အရေးအကြောင်းပျောက်ခြင်း၊ အရေပြားအရောင် ညီညာလာခြင်း၊ တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက်တွေ လျော့ပါးလာပြီး ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ ၀က်ခြံ အနာရွတ်များ ပျောက်ကွယ်လာခြင်း စတဲ့ Skin Care ကောင်းကျိုးတွေရရှိပြီး နုပျိုမှုကို ထိန်းသိမ်းထားပေးပါတယ်။
၃။ မိတ်ကပ်အောက်ခံ Primer အနေနဲ့လိမ်းခြင်း။
Snail Wish က အောက်ခံ အရေပြားအရောင်ကို ညှိပေးတာကြောင့် အပေါ်က ထပ်လိမ်းတဲ့ မိတ်ကပ်ရဲ့အရောင်ထွက်ကို မှန်ကန်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Snail Wish က 💦💦💦 ရေစိုခံတာကြောင့် မိတ်ကပ်ကိုလည်း တစ်နေကုန် ခံစေပါတယ်။ အရေပြားနဲ့ မိတ်ကပ်ကို ခြားနားပေးထားတာကြောင့် မိတ်ကပ်ကြောင့် ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်း၊ အသားအရေထိခိုက်ခြင်း လုံး၀မဖြစ်စေပါဘူး။
၄။ သနပ်ခါးနဲ့ လိမ်းခြင်း။
Snail Wish လေးကို မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး လည်ပင်းပါမကျန်လိမ်းပြီး အပေါ်ကနေ သနပ်ခါးလေး လိမ်းလိုက်ပါ။ Snail Wish က အသားထဲ စိမ့်၀င်သွားတာကြောင့် သနပ်ခါးကို ထိခိုက်မှုမရှိပဲ ၀င်း၀င်းလေးနဲ့ လှနေစေပါတယ်။ သနပ်ခါးကိုလည်း တစ်နေကုန်ခံစေပါတယ်။ သနပ်ခါးမှုန့်တွေကြောင့် ချွေးပေါက်ပိတ်မှာကိုလည်း မကြောက်ရတော့ဘူးပေါ့။
Price ~ 29500 ks
လက် လီ လက် ကား ဖြန့် ချိီ ပါ သည်
နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု: ၂ နာရီ ခန့်က
​ေၾကာ္​ျငာ​ေခါင္​းစဥ္​:Snail Wish Whitening Cream ကို ဘယ်လိုလိမ်းရတာလဲ?
ေစ်းႏႈန္း: 29,500 Ks